Guushii Doorashada JSL Yey Raacday? | Oodweynenews.com , Oodweyne News, OODWEYNENEWS
Guushii Doorashada JSL Yey Raacday?
Waa guul-wadareed ay ummaddu wada leedahay oo cidi gaar u sheegan karrin. Maaha mid kooxi leedahay , maaha mid siyaasi, shaksi iyo xusbi toona.
⦁ Mudnaanta koowaad waxa iska leh shacabweynaha reer Somaliland ee sida quruxda badan u muujiyey waayeelnimo iyo biseyl siyaasadeed oo looga barran wadamo badan oo caalamka sedexaad ah, gaar ahaan Africa. Sida ay ololaha ugusoo baxayeen ee calamada xusbiyada ay taageersanyihiin u lulayeen, sida la isku ixtiraamyey ee aan la iskugu dhicin iyo sidii ay cododkoooda u dhiibteen ee nidaamku ku dheehnaa, intuba waxay ay ku mutaysteen hambalyo, iyo billad sharafta KOOWWAD
⦁ Ciidamada Amniga Qaranka ee sida xiIkasnimada leh ugasoo baxay waajibkoodii, ee nabadgalyada wadanka oo dhan sugay intii xamaasad ololuhu shacabka saaqay iyo intii ka dambeysayba, ayaa iyaguna kaalinta labaad galaya, ayey ila tahay. Digniintii ay siiyeen Majeerteenia ayaa khasab ka dhigtay in maamulkaasu candhuuftiisa dub u liqo oo uu iska ilaawo in uu ku fikiro waxyeeleynta doorashooyinka.
⦁ Komishanka Doorashooyinka Qaranka(NEC) oo muujiyey hawlkarnimo, biseyl siyaasdeed iyo hufnaan ayaa iyaguna ka mid noqday tiirarka ugu dhumucda weyn ee suurta galiyey in doorashadu sidaa quruxda badan u dhacdo. Komishanku wuxu ku guuleystay in doorashadu marto qorshihii ay u dhigeen oo aanay ka weecan iyagoon ka baydhin sida uu dastuurku dhigayo. Waxa ay u dhabar adeygeen culeys badan, waxa ay u dulqaateen meel-ka-dhacyo iyo aflagaadooyin badan oo dhinacyo badan lagagasoo ganayey.
⦁ Xusbiyada qarranka iyo madaxdooda oo iyagu ahaa kuwa tartamaya ayaa iyaguna xilkoodii si wanaagsanbay u guteen. Waxa ay ixtiraameen oo ku qanceen go’aanada komishanka oo ahaa siidhi walaha cayaarta sedexdooda ka dhaxeysay.
⦁ Madaxweyne Axmed Maxamed Silanyo iyo xukuumadiisa oo iyaguna ku dadaalay in doorashadaasu ku qabsoonto waqtigeedii oo marar hore dub u dhac ku yimid. Waxa kale oo waqtigeedii ka hor usoo gudbiyeen kharashkii looga baahnaa dhankooda ee doorashada lagu hirgallin lahaa. Mudane Silanyo taariikhdaa xusi doonta sida uu uga baydhay caadada xun ee kursi jecelka ah, ee cambaarta ku noqotay madax badan oo caalamka sedexaad ah gaar ahaan Africa.
⦁ Goobjoogayaashii caalamiga ahaa ee waqtigooda usoo huray in markhaati ka ahaadaan sida ay doorashadu u dhacdo iyo in xor iyo xalaal tahay iyo inkale.